Wararka - Sida Loo Isticmaalo Kiimikooyinka Daaweynta Biyaha 1
Sida loo Isticmaalo Kiimikooyinka Daaweynta Biyaha 1
Waxaan hadda ahmiyad gaar ah siineynaa daaweynta biyaha qashinka ah markii wasakheynta deegaanka ay kasii darayso. Kiimikooyinka lagu daweeyo biyaha ayaa ah kaabayaal muhiim u ah qalabka daaweynta bulaacada. Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa qaababka loo adeegsado kiimikooyinka kala duwan ee lagu daweeyo biyaha.
I.Polyacrylamide iyadoo la adeegsanayo habka: (Warshadaha, dharka, bullaacadaha degmada iyo wixii la mid ah)
1.silite sheyga sida xalka 0.1% -0,3%. Way fiicnaan laheyd inaad isticmaasho biyo dhexdhexaad ah bilaa milix markii aad milayso (sida biyaha tuubada)
2.Fadlan ogow: Markaad milayso badeecada, fadlan xakamee heerka socodka mashiinka dawada otomaatiga ah, si looga fogaado agglomeration, xaalada indhaha-kalluunka iyo xannibaadda dhuumaha.
3. Stirring waa inuu ka badnaadaa 60 daqiiqo oo leh 200-400 oo duub / min.Waxa fiican in la xakameeyo heerkulka biyaha sida 20-30 ℃, taasi waxay dedejineysaa kala-baxa.Balse fadlan hubi in heer kulka uu ka hooseeyo 60 ℃.
4.Waxay u dhaxeysaa kala duwanaanta ballaaran ee sheygan la jaanqaadi karo, qiyaasta waxay noqon kartaa 0.1-10 ppm, waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo tayada biyaha.
Sidee loo isticmaalaa coagulant rinjiga: (Kiimikooyinka gaar ahaan loo isticmaalo daaweynta bullaacadaha rinjiga)
1. Hawlgalka rinjiyeynta, guud ahaan ku dar rinjiga sunta coagulant A subaxa hore, ka dibna ku buufi rinjiga si caadi ah. Ugu dambayn, ku dar dheecaanka qiiqa coagulant B nus saac kahor shaqada ka tag.
2. Barta qiyaasta ee dheecaanka ceeryaanta midabka Wakiilka wuxuu ku yaal marinka biyaha wareegaya, barta qiyaasta ee wakiilka B wuxuu ku yaal marinka biyaha wareegaya.
3. Iyadoo loo eegayo xaddiga rinjiga lagu buufiyo iyo xaddiga biyaha wareegaya, ku hagaaji xaddiga rinjiga coagulant A iyo B waqtiga ku habboon.
4. Qiyaasta qiimaha PH ee biyaha wareegaya si joogto ah laba jeer maalintii si looga dhigo inta u dhexeysa 7.5-8.5, si wakiilkani u yeesho saameyn wanaagsan.
5. Marka biyaha wareegaya loo isticmaalo in muddo ah, qabashada, qiimaha SS iyo waxyaabaha adag ee adag ee wareega wareega waxay dhaafi doonaan qiime cayiman, taas oo ka dhigaysa wakiilkani mid adag in lagu milmo biyaha wareegaya sidaas darteedna saamaynta ku yeelanaya saamaynta wakiilkan. Waxaa lagugula talinayaa inaad nadiifiso haanta biyaha oo aad bedesho biyaha wareegaya kahor isticmaalka. Waqtiga isbeddelka biyuhu wuxuu la xiriiraa nooca rinjiga, xaddiga rinjiga, cimilada iyo xaaladaha gaarka ah ee qalabka dahaadhka, waana in loo dhaqan galiyaa iyadoo la raacayo talooyinka farsamayaqaannada goobta jooga.